महरालाई बाबुरामको चिठ्ठीः प्रायश्चित गर्नुनै देशको हितमा | Ekhabar Nepal
महरालाई बाबुरामको चिठ्ठीः प्रायश्चित गर्नुनै देशको हितमा
राजनीति असोज १८ २०७६ ekhabarnepal
काठमाडौँ, असौज १
सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बलात्कार आरोपमा मुछिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फेसवुकमार्फत् खुला पत्र लेखेका छन् ।
पत्र मार्फत उनले सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर गल्ती गरेको भए पश्चाताप गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो छ चिठ्ठीको पूर्णपाठ
१) माओवादी नेतृत्व तहमा हामी (विशेषतः प्रचण्ड र म) सुरेश वाग्ले र तपाईंलाई उच्च नैतिकवान् र इमान्दार पात्र मान्थ्यौं । हामी वीच विवाद पर्दा तपाईं दुई जनाको कुरालाई हामीले विशेष महत्व दिन्थ्यौं । प्रचण्ड र मेरो वीचमा २०५५(५६ मा पहिलो ठूलो वैचारिक–सांगठनिक बहस हुँदा २०५६ साउन–भदौमा पन्जाबको रोपडमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा तपाईं दुई जनाको सुझाव मानेर हामीले विवाद हल गरेका थियौं । (दुर्भाग्यवस त्यो बैठक सकेर फर्कनेवित्तिकै भदौ २३ गते गोरखामा सुरेश वाग्लेले गौरवपूर्ण सहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।)
२) माओवादी आन्दोलन यो रसातलको बिन्दुसम्म कसरी पुग्यो ? त्यसको सांगोपांगो विश्लेषण र संश्लेषण छुट्टै गरौंला । हामीले नेपाली क्रान्तिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिखरसम्म पुर्‍याएकै हो । यसमा हामीले सामूहिक गर्व गर्नुपर्छ । तर रोजा लक्जेम्बर्गले भने झैं क्रान्ति स्थीर भएर बस्दैन, कित त्यो अघि बढाइनु–बढ्नु पर्छ, नत्र त्यो पछाडि हट्छ ।
त्यस्तै अर्को भनाइ छ, शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ तर त्यहाँ टिक्न गाह्रो हुन्छ । अझै अर्को भनाइ छ, क्रान्ति सम्पन्न भएको भोलिपल्ट हिजोका क्रान्तिकारीहरू प्रन्तिक्रान्तिकारीमा बदलिन्छन् ।
३) यो प्रकरणमा तपाईं दोषी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न म किटेर भन्न सक्दिनँ । सत्य कि तपाईंलाई थाहा छ, कि सम्बन्धित महिलालाई थाहा छ । तर अहिलेसम्म बाहिर आएका कुराबाट शंकाको सुई तपाईंतिर सोझिन्छ । हामीले एसएलसीमा पुष्कर शमशेरको ‘परिबन्द’ कथा पढ्थ्यौं । त्यहाँ परिबन्दले निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ ।
यदि जानेर वा नजानेर गल्ती वा अपराध भएको हो भने त्यसलाई खुला रूपले स्वीकार्नु र प्रायश्चित गर्नु नै तपाईं स्वयम्, क्रान्तिकारी आन्दोलन र देशको हितमा हुनेछ । भनिन्छ– गल्ती गर्नु अपराध हैन, गल्ती नसच्याउनु अपराध हो ।